0622Mahatoky - FJKM Amparibe Famonjena
Mampanjaka ny fahefany ny Tompo
Tsianjery : “… dia nampanaiky ny zavatra rehetra ho eo ambanin’ny tongony Izy ” Efesiana 1 : 22a
Rehefa nomena an’i Jesoa Kristy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany, mbola hanompo an’iza indray ary isika?
Mampandeha amin’ny fahefana ny Tompo
* Matahora : Manaova hatrany izay mahitsy eo anatrehan’Andriamanitra, fa Izy dia mamaly ny mpanao ratsy rehetra amin’ny fahatezerana mirehitra tokoa. (Hab. 2: 15-17)
* Miverena : Aza manankina ny fiainanao amin’izay andriamani-tsy izy, diniho ny faharavan’ireo niodina tamin’i Jehovah, ary ianaro kosa ny finoan’ireo natoky Azy. (IITan. 13: 4-8)
* Mahadiova : Manana ny fahefana hanafaka antsika amin’ny gejan’ota sy ny aretina rehetra ny Tompo, koa rehefa voavela heloka isika dia mietre eo anatrehan’ny Voninahiny. (Mat. 9: 1-8)
* Minoa: Mandrovi-tsihy satana, dia ilay fahavalo resy. Koa minoa! satria Kristy izay Tompon’ny fahefana rehetra no efa miantso antsika mba hanitsaka sy hanorotoro ilay menarana ela : manoatra noho ny mpandresy izay miaraka Aminy. (Apo. 12: 7-12)
* Mivavaha : Ny fivavaky ny marina dia mahery indrindra; ny Tompo mihitsy no maneho ny fahefany amin’ny alalan’ny mpanompony, ka hampiaiky izao tontolo izao fa Jesoa irery no Ilay hatrizay hatrizay ary ho mandrakizay. (Asa. 4: 27-31)
Maniraka amin’ny fahefana ny Tompo:
* Manangona : Andriamanitra no Tompon’ny asa, isika mpanompony kosa dia iraka sy fitaovana ihany; aza ferana amin’ny fahalalantsika ny fahefan’Andriamanitra fa ny zavatra rehetra hainy atao. (Nom. 11: 16-25)
* Mangataha : Zava-mahagaga ny fitondran’Andriamanitra ny olony , tomoera mandrakariva ao Aminy fa Azy ny fahefana hanamontsana ny fahavalonao rehetra. (IITan. 20: 5-9)
* Matokia : Efa resin’i Kristy ny fahafatesana izay fahavalo farany. Izaho sy ianao koa nomeny fahefana hizara izany fahavelomana izany: amin’ny finoana sy ny fandraisana ny Fanahy masina. (Jao. 20: 19-23)
* Maneke : Kristy no Tompomarika amin’izay rehetra hahatanteraka ny famonjena; izay manara-dia Azy marina tsy mba voafatotry ny fombafomba fa miasa amin’ny faharesen-dahatra. (Lio. 6: 1-5)
* Miasa : Amin’ny fahasahiana noho ny amin’ny fahefan’ny filazantsara no iasan’izay mpanompon’i Kristy marina. (IIKor. 10: 1-11)
* Miambena : Efa mby amintsika ny mpaminany sandoka, dia ireo mampiharoharo fahavetavetana amin’ny fanompoana masina. Na ny olom-boafidy aza hofitahiny amin’ny famantarana lehibe sy fahagagana ataon’ireo. Aza mino ireny ianareo hoy ny Tompo, matokia ny Fanahy masina izay efa nomena anareo, fa ny Voninahitr’Ilay Tompontsika dia miezinezina tsy azo ampitahaina amin’ireny akory. (Mat. 24: 15-18)
* Mitomboa : Izay mitombo tsara amin’ny finoana dia handray hery mihoatra lavitra noho izay heveriny, satria Kristy Ilay nandresy ny fahafatesana no efa manapaka eo amin’ny fiainany. Raha Izy no momba antsika, iza no hahatohitra antsika? (Efe. 1: 15-23)
Ho an’Andriamanitra Tompon’ny fahefana irery ny Voninahitra, fa ho amintsika miara-mandresy Aminy kosa ny fiadanana mandrakizay! Amena!!! Vaomieran’ny Aim-Panahy